Archive du 20180417
Fifandraisana amin’ny Malagasy Hafa ihany i Dada
Niandry ny mety ho fihetsik’i Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, Hery Rajaonarimampianina ny rehetra, ary indrindra ny akon’ny dian’izy ireo tany Vohipeno ny faran’ny herinandro teo. Samy nanao ny seraserany avy, ary somary latsaka i Marc Ravalomanana teo anatrehan’izany,
Fitsarana avo momba ny lalampanorenana Handamina sa hanakorontana firenena ?
Any amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny baolina momba ny lalàna mifehy ny fifidianana hoe heken’izy ireo avy hatrany sa kosa hahitana làlana hiviliana handamindaminanana ny raharaha? Raha ny siosion-dresaka mantsy, dia amin’ity herinandro ity no hivohan’ny valiny; manana 15 andro handinihana ny lalàna sy hanomezana ny heviny ny HCC.
Hery Rajaonarimampianina Tsara raha tsy kandida intsony…
Famoriam-bahoaka eto Iarivo Miorin-koditra ny fanjakana…
Manomboka mahery ny hetsi-panoherana ny fanjakana HVM eo anatrehan’ny fanaovana amboletra sy didin’ny be sandry. Efa re ny famoriam-bahoaka eto Antananarivo amin’ny 21 aprily izao, hanaovana tatitra momba ny resaka lalàm-pifidianana nolaniana amboletra.
Fanisana farany nataon’ny CENI 9 903 913 ny Malagasy hifidy
Miisa 9 903 913 ireo olom-pirenena afaka mifidy raha ny tarehimarika azo teo anivon`ny CENI nandritra ny fanolorana ny vokatry ny famaranana ny lisi-pifidianana tetsy Alarobia omaly. Araka ny voalazan’ny andininy faha 30 ao amin’ny lalàna laharana faha 2012-005 tamin’ny 22 martsa 2012 manan-kery amin’izao fotoana izao dia « Ny 15 aprily no hamaranana tanteraka ny lisi-pifidianana ».
Famaranana ny fotoam-pivoriana teny Tsimbazaza Zara raha nisy depiote nanatrika
Nibodo tsy nety nanatrika ny fivoriana teny Tsimbazaza intsony ireo solombavambahoaka mpanohitra niisa 73 , tsy hita popoka ihany koa ny ankamaroan’ireo mpanohana ny fitondrana ka zara raha nisy depiote nanotrona ny lanonam-pamaranana ny fivoriana tsy ara-potoana faha-4 notontosaina omaly alatsinainy 16 aprily tolakandro tao amin’ny lapam-panjakana tao Tsimbazaza.
Dinika fanavotam-pirenena Manomboka anio any Fianarantsoa
Tontosaina anio sy rahampitso 18 aprily ny ao amin’ny Kolejy Masindahy Saint François Xavier Ambatomena Fianarantsoa ny atrik’asa nasionaly “Fanavotam-pirenena tena izy”, karakarain’ny K3F (Komitin’ny Fahamarinana-Fandriampahalemana-Fiadanana).
Mpanao Kung Fu Hanohitra hatrany ny korontana
Notohizana teto Antananarivo ny hetsika fanamarihana ny faha 38 taonan’ny Kung Fu Wisa ny alahady teo ka hazakazaka rodobe teny Anosy sy Ampefiloha no nanatanterahana izany.
Fitantanam-bolan’ny kaominina Nahazo fiofanana ireo ben’ny tanàna
Misy ny fiofanana maharitra 5 andro omena ireo ben’ny tanàna tetsy amin’ny hotely Le Pavé Antaninarenina. Nanomboka omaly izany ary ireo manampahaizana manokana momban’ny fitantanana ara-bola eto Madagasikara sy any ivelany no mitondra ny traikefany.
Fiaraha-miasan’ny CNaPS - FLM Fandriana sy Soavina indray no nahazo fiofanana
Tsy tokony diso anjara amin’ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasam-piangonanana. Izay no torolalana tsy maintsy tanterahina ho an’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) araky ny fanentanana nataon’ny Filohan’ny FLM Pastora Dr David Rakotonirina raha niaraka nizara ny tombontsoa ho an’ny mpampisa sy ny mpiasa amin’ny fidirana mpikambana ao amin’ny CNaPS.
HETSIKY NY SOLOMBAVAMBAHOAKA
Hivory momba ny hetsika hataon’ny solombavam-bahoaka mpanohitra ny OMC anio. Nilaza izy ireo omaly fa tsy mbola nahazo taratasy fahazoan-dàlana avy amin’ireo olona hanao fihetsiketsehana hatramin’ny omaly.
Fampiasana fitaovam-piadiana simika tany Syria Mitohy ny fifamalian’ny Rosiana sy ny Tandrefana
Mitsipaka marindrano ny fiampangana azy ireo ho manelingelina ny fanadihadiana ataon’ny OIAC momba ny mety ho fampiasana fitaovam-piadiana simika any Syria ny Rosiana.
La Reunion kely Potika sahady ireo trano lay 53 nomen’ny fitondram-panjakana
Misedra olana sahady ireo mponina etsy La Réunion kely amin’izao. Efa simba sahady mantsy ny ankamaroan’ireo trano lay miisa 53 nomen’ny Fitondram-panjakana ho an’ireo tokantrano 53 tafo voakasik’izany eny an-toerana, ka manomboka miverina mandrafitra trano amin’ny “sachet” indray ireo mponina.
Siramamy sy menaka Niaka-bidy indray eny an-tsena
Nahitana fiakarany 200 Ar isaky ny kilao ny vidin’ny siramamy eny amin’ny tsenan’Anosibe nanomboka ny herinandro teo.